🍒Famerenana ny tranokalan'ny trano filokana an-tserasera malaza FastPay 2021
Momba ny orinasa FastPay
FastPay Casino >Famerenana ny tranokalan'ny trano filokana malaza amin'ny Internet FastPay
Famerenana ny tranokalan'ny trano filokana malaza amin'ny Internet FastPay
Ny tranonkala FastPay dia mbola tsy fantatry ny mpankafy filokana rehetra, satria ny taona 2018 vao niseho ilay casino. Rehefa mitsidika azy ianao dia miharihary avy hatrany fa tetikasa kalitao ity. Manome fidirana misokatra amin'ny vaovao rehetra momba ny FastPay ny tranokala - fahazoan-dàlana, fetran'ny top-up sns sns
Fifandraisana an-tserasera FastPay
Ny tranokalan'ny casino dia nadika tamin'ny fiteny rosiana, anglisy, failandey, tiorka, ukrainiana, espaniola, soedoà, poloney, japoney ary fiteny hafa. Miparitaka isan-taona ny safidin'izy ireo. Ny tranonkala dia manana kinova mahazatra sy finday. Ny tranokala ho an'ny finday avo lenta dia namboarina ho an'ny lalao amin'ny alàlan'ny touchpad, manamboatra ho azy ny efijery telefaona sy tablety rehefa mitsidika ianao.
Ny menio lehibe no eo an-tampony indrindra. Misolo tena ireto singa manaraka ireto:
takelaka fisoratana anarana - hahazoana fahazoan-dàlana, mila manome adiresy mailaka sy teny miafina ianao;
rohy mankany amin'ny fizarana"Momba anay","Tournament","Promo","Payments","Support";
hanokatra ny fisoratana anarana fisoratana anarana;
hisafidianana ny fiteny interface.
Misy sora-baventy lehibe eo ambanin'ny menio. Misy fampahalalana momba ny fampiroboroboana, ny fifaninanana ankehitriny, ny vaovaon'ny orinasa sns
Ny ampahany lehibe amin'ny efijery lehibe dia natokana ho an'ny efitrano filalaovana. Ahitana menio fitetezana haingam-pandeha eo anelanelan'ny famandrihana:
"Slots" - masinina slot;
Live - lalao an-tserasera, lalao amin'ny fahitalavitra miaraka amin'ireo mpivarotra;
"Lalao Vaovao" - singa vaovao;
Roulette - karazana roulette isan-karazany;
"Buy Feature" - slot misy fahaizana mividy bonus bonus;
"Bitcoin, ETH, LTC" - masinina manana filokana hilokana amin'ny crypto.
Eo ambanin'ny menio dia misy endrika iray hikarohana lalao amin'ny anarany. Eto ianao dia afaka mampiseho ny lalao mpamatsy iray manokana. Raha fintinina dia misy mpandrindra maherin'ny 30 ilay tranonkala - Yggdrasil, Tomhorn, Kagaming, iSoftBet, Microgaming, sns. Ny lalao rehetra dia voamarina ary manana rafitra fanaraha-maso ny fahamarinana.
Ireto ambany ireto ny lalao amin'ny fizarana voafantina. Masinina slot FastPay dia heverina fa amin'ny fomba maimai-poana. Tsy mila misoratra anarana akory ianao raha hihazakazaka slot amin'ny maody fampisehoana.
Ny pejy fandraisana dia mampiseho koa ny mombamomba ny mpandresy farany, ny fandresena avo indrindra ary ny jackpot nandresy.
Eo am-pototry ny tranokala FastPay ofisialy dia misy fampahalalana ara-dalàna, rohy mankany amin'ny"Fifanarahan'ny mpampiasa","Terms and Conditions", fizarana iray. Maizina ny ao ambadiky ny tranokala, ary maivana sy maivana ireo marika sy fanaraha-maso. Toa mahasarika sy kanto ity fitambarana ity.
Fanohanana ho an'ny mpanjifa FastPay
FastPay Casino dia manome ny fanohanan'ny mpanjifa isan'andro. Raha mila fanontaniana sy olana dia mifandraisa azafady:
mailaka ofisialy - ny rohy dia hita ao amin'ny fizarana Fanohanana;
amin'ny alàlan'ny rafitry ny tapakila - ny endrika fandefasana fangatahana dia hita ao amin'ny fizarana"Support";
amin'ny alàlan'ny resaka an-tserasera - ny rohy mankany dia hita eo amin'ny zoro ambany ankavanana.
Ny valin'ny fanontaniana mahazatra indrindra dia omena ao amin'ny fizarana"FAQ".
Fandoavam-bola FastPay Casino
Ny fampahalalana momba ny rafitra fandoavam-bola tohana, ny fetra fametrahana ary ny fisintahana dia omena ao amin'ny fizarana"Fandoavam-bola" sy"Fepetra sy fepetra" Amin'ny casino FastPay dia azonao atao ny manokatra kaonty amin'ny dolara, euro, krone norveziana, aostralianina, dolara kanadiana ary zélandy, yen, zloty, randy afrika atsimo, cryptocurrency malaza - DOGE, BTC, BHC, ETH, LTC, USDT. Ny mpilalao iray dia afaka mampiasa vola maromaro - azonao atao ny manampy kaonty amin'ny vola tsirairay avy aorian'ny fisoratana anarana.
Ny fanaovana crédit ny petra-bola amin'ny FastPay dia tanterahina eo noho eo, ny fisintom-bola amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia atao ao anatin'ny 2 ora. Raha ny rafitra Rapid Transfer dia mety haharitra 3 andro fiasana ny fisintahana
Fepetra takiana amin'ny fametraham-bola sy fisintomana:
Vidim-bola farafahakeliny - 1 DOGE, 0,01 USDT, 0,01 LTC, BHC, ETH, 0,0001 BTC, 10 USD, 150 ZAR, 10 EUR, 13 AUD, CAD, 87 NOR, 14 NZD, 1066 JPY, 37 PLN.
Ny habetsaky ny famenoana indray mandeha (miankina amin'ny rafitra voafantina) - 4000 USD, EUR, 426398 JPY, 60460 ZAR, 34635 NOR, 5191 AUD, 5069 CAD, 14970 PLN. Tsy misy fetra farany ambony ho an'ny cryptocurrency.
Vidin'ny fisintomana kely indrindra - 20 USD, EUR, 300 ZAR, 26 AUD, CAD, 175 NOR, 28 NZD, 2100 JPY, 75 PLN, 0,001 BTC, 0,01 ETH, 20 USDT, 1000 DOGE, 0,01 LTC, BCH.
Tsy mihoatra ny 4000 USD, EUR, 426398 JPY, 10 ETH, BCH, LTC, 10000 DOGE, 1000 USDT, 60460 ZAR, 34635 NOR, 5191 AUD, 5069 CAD, 14970 PLN azo esorina isaky ny fifanakalozana.
Mikarakara fifaninanana ho an'ny mpilalao matetika ny casino. Manolotra loka maimaimpoana sy valisoa vola izy ireo. Ny valisoa dia azon'ireo mpilalao mandray ny iray amin'ireo toerana 50 voalohany. Raha te handray anjara amin'ny fifaninanana dia mila mankany amin'ny"Tournoiens" ianao, misoratra anarana amin'ny fifaninanana mety. Alohan'ny handraisanao anjara dia mba vakio tsara ny fepetra sy ny fepetra
Ny fizarana ny volan'ny loka dia atao amin'ny alàlan'ny isa azo. Izy ireo dia isaina amin'ny fametrahana filokana amin'ny lalao tototry ny fifaninanana.
Tolotra Bonus ho an'ny mpanjifa FastPay casino
Ny programa bonus FastPay dia soloin'ireto tolotra manaraka ireto:
Tombony fametrahana. Nahazo ho isan-jato ny habetsaky ny top-up - 50, 60, 65, 75, 100 ary 150%. Ny bonus deposit dia misy ho an'ny mpanjifa vaovao sy efa misy. Ny mpanjifa vaovao dia afaka manantena valisoa fametrahana voalohany sy faharoa. Ao anatin'ny top-up voalohany dia mahazo hatramin'ny 100 EUR, USD, 44,000 DOGE, 1,9 LTC, 0,5 BCH, 0,256 ETH, 370 PLN, 10,066 JPY, 140 NZD, 1,500 ZAR, 870 NOR, 130 CAD ary AUD, ny mpilalao arakaraka ny volan'ny replenishment. Ankoatr'izay, mahazo spin maimaim-poana ilay mpilalao. Ny habetsaky ny bonus FastPay farany ambony ho an'ny tahiry faharoa dia indroa kely noho ny voalohany. Ny bonus deposit dia omena ihany koa ho an'ny top-up amin'ny talata sy zoma, saingy tsy azon'ny mpilalao rehetra izany.
Tsy misy bonus apetraka. Natolotra ho an'ny mpanjifa casino rehefa nahatratra ambaratonga vaovao amin'ny programa tsy fivadihana, ary koa isaky ny sabotsy amin'ny endrika spin maimaim-poana. Ny tombana amin'ny sabotsy dia iharan'ny top-up tamin'ny herinandro lasa teo.
Cashback. Nandoa vola tamin'ireo mpilalao nahatratra ambaratonga faha-9 farafaharatsiny ao amin'ny rafitra mahatoky. Ny vola miverina dia miverina amin'ny endrika 10% amin'ny habetsaky ny fatiantoka rehetra amin'ny slot isam-bolana. Tsy mihatra amin'ny filokana bonus io.
Kaody fampiroboroboana. Ny kaody fampiroboroboana manokana dia manome alalana anao handray vola bonus na spin maimaim-poana. Navoaka tamin'ny mpilalao mavitrika izy ireo, navoaka tsindraindray tao amin'ny lisitry ny mailaka dokambarotra sy ny fantsona ofisialy FastPay Telegram.
Ny lisitra feno an'ny tolotra fanomezana casino FastPay dia azo jerena ao amin'ny faritra"Promo".
Fitaratry ny casino an-tserasera FastPay
Ny casino an-tserasera dia manolotra hametraka filokana amin'ny tranokala FastPay lehibe sy ny fitaratra. Ny fitaratra FastPay dia tsy mitovy amin'ny tranokala ihany ao amin'ny URL. Izy io dia manana fampiasa mitovy tanteraka, interface, mamela ny mpanjifa casino hampiasa ny fahaizan'ny kaontiny manokana, handray bonus.
Ny fitaratra FastPay dia mamela ny trano filokana:
mizara entana betsaka eo anelanelan'ny tranonkala;
manome ny mpanjifa fidirana amin'ny sehatry ny lalao, na inona na inona antony ivelany sy anatiny - manakana ny sehatra lehibe ataon'ny mpamatsy Internet, asa ara-teknika.
Ny tranonkala ofisialin'ny FastPay dia miantoka ny fiarovana ny angon-drakitra manokana sy ny fifanakalozana ara-bola. Manolotra fialam-boly filokana betsaka dia be - afaka misafidy izay mety indrindra ho azy ny tsirairay